HTCdev ကို သုံး၍ သင်၏ HTC Bootloader ကိုသော့ဖွင့်နည်း | Androidsis
Bootloader ကိုဖွင့်ပါ များစွာသော HTC ဆိပ်ကမ်းများ၏, HTCdev ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်အတူလေပြေဖြစ်ပါတယ်။
HTCdev သည်အွန်လိုင်းကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်, ငါတို့၏ bootloader ကိုလွှတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မည် HTC ကအများကြီးထဲကနေရွေးချယ်နိုင်ဖြစ်ခြင်း သဟဇာတ devices များ တစ်ခုပို။ ပို။ ကြီးမားတဲ့စာရင်းအကြားကနေ။
နောက်တစ်ဆင့်အနေဖြင့်အထက်ဖော်ပြပါဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင်လိုအပ်သည့်ကိရိယာကိုဒေါင်းလုပ်ချခြင်း၏နောက်ဆုံးရလဒ်နှင့်အတူဖော်ပြရန်လုပ်ငန်းစဉ်တွင်လမ်းညွှန်သွားပါမည်။ အဆိုပါ bootloader သော့ဖွင့် ရွေးချယ်ထားသည့် terminal ကို၏။
ပထမဆုံးလုပ်မှာကတော့ HTCdev website ကိုဝင်ပါ မှတ်ပုံတင်ပြီးရင်မှတ်ပုံတင်ပြီးရင်သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့လိမ့်မယ် အတည်ပြု link ကို, ငါတို့ကလစ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုသက်ဝင်.
မှတ်ပုံတင်ခြင်းသက်ဝင်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်ပါမည် HTVdev ဝဘ်ဆိုက် ပြီးတော့ငါတို့ကိုယ်တိုင်ကိုခွဲခြားသိမြင်လိမ့်မယ် username နှင့် password ကိုဤအရာပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝဘ်စာမျက်နှာအတွက်အသုံးပြုသူလမ်းညွှန်နှင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
၏အဓိကစာမျက်နှာကနေ HTCdevကျွန်ုပ်အနက်ရောင်ဖြင့်မှတ်သားထားသည့်ရွေးစရာကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်လိမ့်မည်။ Bootloader Unlockအောက်ဖော်ပြပါပုံကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့လိမ့်မည်။
ဒီမျက်နှာပြင်အသစ်မှာ option ကိုရွေးပါလိမ့်မယ် Started ရ, ဘဲဥပုံအစိမ်းရောင်ခလုတ်ကိုအတွင်း၌သော။
ဤဖန်သားပြင်အသစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်မြှားကိုနှိပ်ပါ သင့် Device ကိုရွေးပါ ဒါရှိရလိမ့်မည် menu ကို drop HTC မှမော်ဒယ်ကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံစံကို drop down list တွင်မတွေ့ပါက၎င်းသည်နည်းလမ်း၏ဆိုလိုသည် HTCdev ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal နှင့်မကိုက်ညီပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ terminal ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ Bootloader ကိုဖွင့်ပါသို့ဖြစ်လျှင်ငါတို့သည်ထင်ရှားရကြလိမ့်မည် သတိပေးမျက်နှာပြင် ငါတို့၏ bootloader ကိုသော့ဖွင့်ခြင်း၏အကျိုးဆက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားသတိပေးသည် HTC က.
ငါတို့အမှတ်အသားပြုရမယ် နှစ်ခု check box များ အသိပေးချက်ကိုလက်ခံဖို့ကိုနှိပ်ပြီးအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်စာမျက်နှာတွင် HTCdev, ညာဘက်အပေါ်တစ် box ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုအကြောင်းကြားပါလိမ့်မယ်, ကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့ရမယ်သောအစီအစဉ်များ၏ ငါတို့ဒေါင်းလုပ်လုပ်မည့်သော့ဖွင့်သောကိရိယာသည်မှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်အလုပ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါကိရိယာများဖြစ်ကြသည် Android SDKအဆိုပါ Java Runtime Environment နှင့် HTC Syncအကယ်၍ သင့်တွင်၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိပါက bootloader unlocking tool ၏ download လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆက်မလုပ်မီ၎င်းတို့ကိုထည့်သွင်းရပါလိမ့်မည်။
Tools စာမျက်နှာနှင့် Bootloader ကို HTCdev တွင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပါ
အရာအားလုံးကို install လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်သည် သော့ဖွင့် tool ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ထိုသို့ပြုလုပ်ရန်အောက်ဖော်ပြပါစာရင်းအသစ်တွင်ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ ကုန်ချ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်ကရွေးချယ်ထားသည့် terminal ကိုအကောင်းဆုံးကိုက်ညီ။
မော်ဒယ်အရဒေါင်းလုပ်ကို HTCdev တွင်ရွေးချယ်ပါ
download လုပ်ရန် tool ကိုရွေးပါ
မော်ဒယ်စာရင်းထဲကနေရှေးခယျြခဲ့ပြီးတာနဲ့ download ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ, ဖိုင်ကိုစတင်ပါလိမ့်မယ် အလိုအလျောက် download လုပ်ပါ, ၎င်းသည်ပြီးဆုံးရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်ဆိုင်းပြီးသင်တောင်းဆိုပါကခွင့်ပြုချက်ပေးပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားပါမည်။
သက်ဆိုင်တဲ့ download လုပ်ထားတဲ့ဖိုင်ပြီးသွားရင်၊ အောက်ကပုံစံအတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ် -
ယခု ငါတို့အမှတ်အသားပြုလိမ့်မည် ပြီးတော့ကျနော်တို့ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ နောက်တစ်ခု.
နောက်မျက်နှာပြင်တွင်၊ ပရိုဂရမ်ကကျွန်ုပ်တို့လုပ်ရန်သတိပေးသည် usb မှတစ်ဆင့်ကွန်ပျူတာနှင့်ချိတ်ဆက်ပါဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ကိုညွှန်ပြချက်ပေးသည် မည်သည့်ပါဝါပြတ်တောက်မှုကိုရှောင်ရှားကြစို့ သော့ဖွင့်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းမည်သည့်အရာနှင့်မျှမထိမိစေသင့်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အားအကြံပေးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာအားအိပ်စက်ခြင်းသို့မဟုတ်ရပ်နေခြင်းမှကာကွယ်ခြင်း.
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ကိုမဆက်သွယ်မီကျွန်ုပ်တို့မှစစ်ဆေးရမည် တူညီတဲ့ settings ကို menu ကို, ငါတို့မှန်ကန်စွာ၏ option ကိုသက်ဝင်ပါပြီ USB debugging ဒါကအထဲမှာပါ မီနူး။ ချိန်ညှိချက်များ၊ အပလီကေးရှင်းများ, တိုးတက်ရေး.
ဤအရာအလုံးစုံကိုအတည်ပြုပြီးတာနဲ့ငါတို့သေချာအောင်ပါလိမ့်မယ် HTC တွင် ၃၀% ကျော်ဘက်ထရီရှိသည်, ငါတို့၏ checkbox ကိုမှတ်ထားပါလိမ့်မယ် program ကိုသော့ဖွင့် bootloader, ငါတို့သည် button ကို click ပါလိမ့်မယ် နောက်တစ်ခု.
မျက်နှာပြင်တစ်ခုရလိမ့်မယ် terminal နဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုရှာနေတယ်ထို့နောက်aတပ်ဆင်မှုတိုးတက်မှုမျက်နှာပြင်နောက်ဆုံးတွင်အရာရာတိုင်းသည်ပြီးပြည့်စုံသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အားပြသမည့်မျက်နှာပြင်၊ ရွေးစရာကိုရွေးရမည် ထွက်ပေါက်.
ဒီနှင့်ပြီးသား ကျွန်ုပ်တို့၏ HTC terminal ၏သော့ဖွင့်ပါလိမ့်မည်သင့်စက်သည်ထိုသဟဇာတဖြစ်မှုရှိမရှိကိုသိရှိရန်သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သာသွားသင့်သည် HTCdev နှင့်သူတို့၏သဟဇာတထုတ်ကုန်သူတို့ရဲ့ကျယ်ပြန့်စာရင်းတွင်ထွက်စစ်ဆေးပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - HTC Ville C အသစ်၊ One S ၏စီးပွားရေးမူကွဲ
ရင်းမြစ် - HTCdev
ဓာတ်ပုံများ - HTCdev
ဒေါင်းလုပ်များ - Android SDK, Java Runtime Environment, HTC Sync
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC က » များစွာသော HTC ဆိပ်ကမ်းများ၏ Bootloader ကို HTCdev ဖြင့်သော့ဖွင့်နည်း
Rafa indi ဟုသူကပြောသည်
Rafa Indi သို့ပြန်သွားပါ
Juan Carlos G ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ terminal မှ unlocking tool ကို download လုပ်သည့်အဆင့်အတွက်၊ ကျွန်ုပ်မည်သည့် version ကို download လုပ်ရမည်နည်း။
Juan Carlos G ကိုပြန်ပြောပါ
သင်သည် HTCdev ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဝင်ကြည့်ပါက၊
သင်သည်မှတ်ပုံတင်ပြီးသင်၏ terminal ကိုရွေးချယ်သည်။
သင့်ရဲ့ terminal ကို၏မော်ဒယ်နှင့်အတူ
Abdedaim El Achhab အယ်လ် Kheffa ဟုသူကပြောသည်
လိမ္မော်ရောင်အော်ပရေတာမှသော့ခတ်ထားသောဖုန်းတွင်ကျွန်ုပ်သည်0ကိုမှ io reinstall android ကိုသော့ခတ်ခြင်းကိုဖယ်ရှားရန်တစ်ခုခုပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ ဒါဟာငါဖြေဆိုရန် htc အလိုရှိ၏
Abdedaim El Achhab El Kheffa အားစာပြန်ပါ
မင်္ဂလာပါ၊ ခြေလှမ်းအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုက်ခဲ့ရပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်မဖွင့်ခဲ့ပါဘူး ပြီးဆုံးသောအခါဤအရာကိုထည့်သွင်းပါက (သင်၏ ROM ဗားရှင်းကိုမထောက်ပံ့ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုမထောက်ပံ့မီတစ်ရက်ရှိလိမ့်မည်။ သင်သည်ဖုန်းကိုနောက်ဆုံးရော့ခ်ကုဒ်ဖြင့်အဆင့်မြှင့်ရန်သတိပေးချက်တစ်ခုရလိမ့်မည်။ သင်ပြုပြင်ပြီးသည့်နောက်၊ RUU ကိုထပ်မံ run ပါ။ ဖုန်းကိုသော့ဖွင့်ဖို့ hboot ကို update လုပ်ဖို့အဆင်မပြေမှုအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာနံနက်ခင်းမှာ၊ မင်းဟာမင်းနဲ့အတူတူပဲ။ မင်းဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲ Wilfire A3333 ။
စန်ဒရာ Petita ဟုသူကပြောသည်
ငါစာရင်းကိုကြည့်, ငါ software ကိုဗားရှင်းကို update ပါပြီကတည်းကကြောင့်ငါ့ကိုနံပါတ်ပေးသည်, ငါစာရင်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်ရှိသည်တလော
Sandra Petita အားပြန်ပြောပါ
က sony ericcson တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ wt19 အလုပ်လုပ်တယ် ??
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ htc desire c ရှိတယ်။ ဘယ် rom ကိုရွေးရမလဲ ???
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်မှာ HTC cobalt model PG05100 ရှိတယ်။ မော်ဒယ်ကို HTCdev စာရင်းတွင်မတွေ့ပါ။ ဒါကသော့ဖွင့်လို့မရဘူးလို့ဆိုလိုတာလား။
ခရစ်ယာန် dgz ဟုသူကပြောသည်
ruu htc exporer အတွက်ဘယ်လို download ဆွဲရမလဲ
christian dgz အားပြန်ကြားပါ
ဟေ့။ ငါမက္ကဆီကိုကနေပေါ့။ မော်ဒယ်ကခြေဆွံ့သူဖြစ်တယ်။
ငါမက္ကစီကိုကပါ။ သင် bootloader ကိုသော့ဖွင့်လို့ရမလားမသိ၊ ကျွန်ုပ်၏အီးမေးလ် ၆၆၆ ဘလက္ @@ Hotmail.es
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အဆင့် 12 သို့သွားပြီးထိုအရပ်မှကျွန်ုပ်မသွားပါ၊ ကျွန်ုပ်မိတ္တူကူးယူပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Unlock_code.bin flashboot unlocktoken ။
ငါဘာလုပ်နိုင်လဲ၊ အမှားဘယ်မှာလဲ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် "fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin" ကိုကူးယူသည့်အခါကျွန်ုပ်အမှားတစ်ခုရရှိသည်။ ထိုအခါငါငါ့ထံသို့ပေါ်လာသောအရာကိုတစ် ဦး မိတ္တူ - ငါးပိထားခဲ့ပါ
မအောင်မြင် (ဝေးလံခေါင်သီ - သော့ခတ်အမှတ်အသားစစ်ဆေးမှုမအောင်မြင်ပါ)
ပြီးပြီ စုစုပေါင်းအချိန်: 0.230s
မည်သူမဆိုအဖြေရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ တင်ပါ။
စကားမစပ်, ငါ့ဆဲလ်မူရင်း၏ htc တ ဦး တည်း x ကို (4 cores နှင့် tegra3)
သော bootloader သော့ဖွင့်ဘူး !!! နောက်မှသော့ဖွင့်နိုင်ဖို့ ROM ဗားရှင်းကို install လုပ်ပါမယ်။ ဒီ charlatans ကိုသတိထားပါ။
မင်္ဂလာပါကျွန်တော် htc ရဲ့ဆန္ဒကိုလျှို့ဝှက်မီနူးထဲမှာသော့ဖွင့်ထားသော်လည်းထွက်ပေါ်လာနိုင်သော်လည်း network ကိုပိတ်ဆို့ထားကြောင်းကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါပြီ။
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်အကူအညီလိုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်၏ htc one m7 ၏ bootloader ကိုမတော်တဆပိတ်ဆို့လိုက်သည်။ ၎င်းကို htcdev ဖြင့်သော့ဖွင့်ရန်ကြိုးစားသော်လည်းနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်ပို့လိုက်သော bug တစ်ခုရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုမသိသေးပါ။ ...
ငါဖုန်းကိုဖွင့်ဖို့ကြိုးစားပေမယ့်သူကအစဉ်မပြတ်ငါ mode ကို reboot လုပ်ပေးသည်, ငါ့ကိုဘာမှလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုမထားဘူး ,,, ထိုသို့ငါ့ကိုထည့်သွင်းထား *** RELOCKED ***
*** လုံခြုံရေးသတိပေးချက် *** သင်၌ဖြေရှင်းချက်ရှိပါကကျွန်ုပ်အားဘာလုပ်သင့်သည်ကိုပြောပြပါ ...
Android 4.0 ဖြင့် Samsung အတွက် S-Voice ကို download လုပ်ပါ